विद्यार्थीका रूपमा जापान आउँदा अन्तरवार्तामा के सोधिन सक्छ ? – Todays Nepal
हालैका दिनमा विद्यार्थीका रुपमा जापान अाउनकाे लागि जापानकाे इमिग्रेसनबाट 在留資格認定証明書 अर्थात CERTIFICATE OF ELIGIBILITY पाएर पनि नेपालस्थित जापानी एम्बेसीबाट भिसा स्वीक‍ृत नगरिएर जापान अाउन नपाएका धेरै विद्यार्थीहरु छन् । स्कुलकाे लागि तिरिएकाे पैसा पनि स्कुलहरुले नेपालबाट भिसा नपाएकाहरुलाई फिर्ता गरिराखेकाे अवस्था पनि छ । कतिपयकाे स्कुलले पैसा फिर्ता गर्ने बेलामा विना अानाकानी अाफुले तिरेकाे पैसा फिर्ता नगरेकाे भन्ने कुराहरु पनि बाहिरिएका छन् । पहिलेपहिले नेपालमा अन्तरवार्ता दिनुपर्ने थिएन । CERTIFICATE OF ELIGIBILITY पाएपछि लगभग जापान अाउने भिसा पाए सरह नै हुन्थ्याे । तर हालैका दिनमा निकै कडा गरिएकाे अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालस्थित जापानी एम्बेसीमा के कस्ताे प्रश्नहरु गर्लान ? त्यसकाे बारेमा केही जानकारी भए बताइदिनुहाेला भन्ने अनुराेधहरु पनि हामीलाई म्यासेजमा अाएकाे छ । तर याे निकै अप्ठेराे विषय पनि हाे । किन भने अन्तरवार्ता लिने व्यक्तिकाे माेडमा के साेध्न सक्छ भन्ने कुरा भर पर्छ । हुन त के कस्ताे प्रश्नहरु साेधियाे भने उक्त व्यक्तिकाे के के कुराहरु थाहा पाउन सकिन्छ भनेर त्यही अनुसार तयार पारिएकाे हाेला नै तर कतिपय अवस्थामा अाफुलाई साेधेकाे कुरा पनि प्रश्न नै नबुझेर उत्तर दिन नसकेकाे अवस्था पनि रहन्छ । त्यसाे त मन ध्यान दिएर पढेकाे व्यक्तिलाई जस्ताे प्रश्न गरे पनि कुनै समस्या रहँदैन किन भने उसले हरेक कुराकाे तयारी गरिराखेकाे हुन्छ । त्यसाे त अन्तरवार्तामा लाेकसेवा अायाेग जस्ताे विभिन्न खाले प्रश्नहरु साेध्ने गरिंदैन । अन्य कुराहरु भन्दा पनि अाफ्नै व्यक्तिगत कुराहरु बढी साेधेकाे पाइएकाे छ र त्याे एकहदसम्म सही पनि हाे र सजिलाे पनि छ । किन भने मेराे नाम याे हाे, मेराे घर याे ठाउँमा हाे मेराे बाबाकाे नाम याे हाे र मेराे बाबाले यस्ताे गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु साधारणतय जापानी भाषा पढ्नेकाे लागि त्यति अप्ठेराे भने हाेइन । साधारणतय साेध्न सकिने खालकाे केही उदाहरणहरु भने निम्न रहेकाे छ ।
प्रश्न: にほんご が　わかりますか？できますか？(निहाेङ्गाे गा वाकारिमासका) याे तपाइँले जापानी भाषा कत्तिकाे जानेकाे छ भनेर साेध्ने पहिलाे प्रश्न हाे । वाकारिमासका अथवा बुझ्नुहुन्छ भनेर साेधिने पहिलाे प्रश्न हाे । कहिलेकाहीं वाकारिमासका भन्ने शब्दमा देकिमासका भनेर पनि साेध्न सक्ने अवस्था रहन्छ । जापानी भाषामा देकिमासका भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा प्रयाेग हुन्छ । जसकाे अर्थ हुन्छ तपाइँ सामर्थ्यवान हुनहुन्छ ? भनेर साेध्नकाे लागि याे शब्दकाे प्रयाेग गरिन्छ । जापानी भाषा वाकारिमासका भनेर साेधनी हुँदा बुझ्ने तर देकिमासका भनेर साेधनी हुँदा नबुझ्ने गरिएकाे पनि पाइन्छ । त्यसैगरी वाकारिमासकाे अगाडि शब्दलाई पाेलाइट बनाउनकाे लागि お प्रयाेग भएकाे छ भने त्यसकाे अर्थ नै नबुझ्ने अवस्था पनि रहन्छ । नामाए वा नान देसका ? भनेर साेधेकाे खण्डमा बुझ्ने तर अगाडि अाे थपाेर अाेनामाए वा नान देसका ? भनेर साेधनी हुँदा केही थाहा नभएर अाेनामाएवा नान नेसका भनेर उल्टै प्रश्न साेध्ने व्यक्तिलाई नै उल्टै प्रश्न गरेकाे रमाइलाे घटनाहरु पनि सुन्नमा पाइन्थ्याे । おわかりますか？भनेर साेधिएकाे अवस्थामा पनि जापानी भाषा बुझ्नुहुन्छ ? भनेर साेधिएकाे हाे भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । त्यसकाे लागि धेरै शब्द भण्डार र विभिन्न ताैरतरिकाकाे अध्ययन नै हाे भन्दा फरक नपर्ला ।उत्तरमा सुकाेसी वाकारिमास भनेर भन्न सक्नुहुनेछ ।
प्रश्न: あなた　の　おなまえは　なん　ですか。अथवा おなまえは？अथवा じこしょうかいおねがいします。तपाइँकाे नाम के हाे ? तपाइँकाे नाम ? तपाइँकाे परिचय दिनुहाेस् । यसरी तपाइँकाे नाम साेध्नकाे लागि पनि विभिन्न तरिकाले साेध्न सक्छन् । नेपाली भाषामा पनि विभिन्न तरिकाहरु छन् परिचय माग्नकाे लागि । जापानीमा पनि त्यही खाले विभिन्न तरिकाले परिचय माग्न सकिन्छ । तपाइँकाे नाम के हाेला ? तपाइँकाे शुभ नाम ? तपाइँकाे परिचय दिनुहाेस् । भन्ने खालकाे विभिन्न तरिकाले साेध्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तर जे भए पनि जसरी घुमाएर भने पनि तपाइँकाे नाम साेधिएकाे हाे भन्ने कुरा थाहा पाउनुहाेस् ।
प्रश्न: おうちは　どこ　ですか?　おすまいは？しゅっしんちはなんというところですか？यसरी तपाइँकाे घर कहाँ हाे भनेर साेध्नकाे लागि पनि विभिन्न तरिकाहरु छन् । जसरी साेधेपनि तपाइँले यही कुरा साेधेकाे हाे भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुभयाे भने खासै अप्ठेराे भने हाेइन । अाेउचिवा दाेकाे देशका भनेर साेध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने अाेसुमाइवा ? भनेर पनि साेध्न सक्ने भयाे त्यसैगरी तपाइँकाे जन्मस्थल कुन ठाउँ हाे भनेर पनि साेध्न सक्ने भएकाेले यस्ता खालकाे एउटै अर्थ लगाउने विभिन्नखालकाे शब्दहरु याद गर्नेगर्नुहाेला ।
अन्य साेध्न सक्ने प्रश्नहरु भनेकाे -परिवारकाे सदस्यहरु काे काे हुनुहुन्छ । तपाइँकाे जन्ममिति कहिले हाे । तपाइँकाे बाबाले के काम गर्नुहुन्छ । अथवा वावाकाे पेशा के हाे । कतिबजेदेखि कतिबजेसम्म पढ्नुहुन्छ । तपाइँकाे स्कुल कहाँ हाे । जापान गएर के गर्ने याेजना छ । पढाइ सकेर के गर्ने याेजना छ । यस्तै यस्तै प्रश्नहरु साेधिएकाे र साेध्न सकिने रहन्छ । तर जे साेधे पनि त्यसकाे कलात्मक रुपले उत्तर दिन सक्नु अन्तरवार्ता दिनेकाे कला हाे भने अर्काे पक्ष भनेकाे सत्यता कतिसम्म भन्ने कुरा अर्काे पाटाे हाे ।